China okuphezulu kokuhlanza isibalo kubhekane nokungcola okusindayo YF-Zcs 58 57 56 ifektri kanye nabaphakeli YUNFENG
ukuhlanza okuphezulu kokuqina kokungcola okusindayo YF-Zcs 58 57 56
I-High Consistency Pulp Cleaner / Desander Separator / Sand Remover / Sand-Catcher Incazelo yomkhiqizo: Izicoci ze-HD zingabahlanzi abaphambili abahlukahlukene abakwazi ukucubungula amathani angamakhulu amaningana e-fiber ngosuku. Inhloso enkulu yokuhlanza abantu abaningi ukuhlukanisa ukungcola okusindayo kwimicu ngokumiswa kwentambo emanzini .Lokhu kuvikela imishini esezansi ekugqekekeni nasekulimaleni ngokweqile. Zingasetshenziselwa ukutakula kwe-fiber. Isigaxa esiphindwe kabili sokuhlanza uginindela kuqhubekile ...
Ukuguquguquka Okuphezulu Kwe-Pulp Acashile / Isihlukanisi se-Desander / Isisusi seSand / Isibambi-Sand
Abahlanza i-HD bangabahlanzi abaphambili abanzi abaphambili abakwazi ukucubungula amathani angamakhulu amaningana e-fiber ngosuku. Inhloso enkulu yokuhlanza abantu abaningi ukuhlukanisa ukungcola okusindayo kwimicu ngokumiswa kwentambo emanzini .Lokhu kuvikela imishini esezansi ekugqekekeni nasekulimaleni ngokweqile. Zingasetshenziselwa ukutakula kwe-fiber.
Isigaxa esiphindwe kabili sesigaxa sokuhlanza isisindo semishini esezingeni eliphakeme yimishini yokuhlanza esezingeni eliphakeme, ikakhulukazi ekuhlanzweni kwemfucumfucu yephepha kangcono, ingesinye sezinto ezisemqoka zemfucumfucu yamaphepha asetshenziswayo ebalulekile. Isebenzisa imicu ehlukene kanye nenani lokungcola, ukuze umgomo wokwehlukaniswa kwe-centrifugal kokungcola okusindayo kuginindela ukuphuma ukuhlanza izinhloso zempuphu. Idivayisi esebenzisa okubanzi, kokubili ukungaguquguquki okuphezulu kwempuphu yokuhlanza. Ngaphambi kokuba umshini futhi usetshenziselwe ukungaguquguquki okuphansi kwe-pulp cull yokuhlanza.
I-Cleaner ilula, iyindawo encane, amandla amakhulu, i-automation ingalungisa ukusebenza okulula kwe-slagging. Ukuvaleka kompompi, kuhlanzekile futhi kusebenza kahle, isikhathi esisodwa kuphela nge-Cleaner slurry, imishini yokuphatha i-slurry ayisadingeki umsila, ukulahleka okuncane kwe-fiber. Ukugqokwa kwesigaxa nokuphila okude: ayikho idrayivu, akusekho ukugcinwa, kunezinhlobo ezimbili zokuzenzakalela nezokuzenzela.
Ukugeleza m3/ Min
Icubungula umthamo t / d
Ukuhlanzeka kokuguquguquka okuphezulu kusetshenziselwa ukususa ukungcola okuncane nokusindayo okufana nensimbi, isipikili sencwadi, umlotha, isihlabathi, i-cullet nokunye. Inhloso yokuxegisa imishini yokukhanyisa, ukuhlanza uginindela nokwenza ngcono ikhwalithi izofinyelelwa.
1. Ukufaka ipayipi nge-engeli ethile yokuthambekela kuzokwakha amandla amakhulu okugeleza kwe-vortex ukuhlukanisa ukungcola okusindayo ngempumelelo.
2. Isigaxa somzimba samukelwa i-alumina yokugqoka i-ceramic engazweli eqinisekisa isikhathi eside esiwusizo.
3. Isakhiwo esiyizigaxa ezimbili sinciphisa ukulahleka kwefayibha ngenkathi sikhulisa ukusebenza kahle kokuhlukaniswa kokungcola okukhulu.
4.Kulawulwa ngohlelo oluzenzakalelayo lwe-PLC, lusebenzise amandla emisebenzi nakwizinto zokwakha.
Langaphambilini Imishini yokudonsa engu-133 Yokuhlanza Ubuningi Obuphansi, Isikrini Sokucindezela
Olandelayo: Ama-reverse cleaners ahlukanisa i-lightweight (wax, plastic, nezinye izinto ezinamathelayo.) Ezingcolisa imicu
I-Hd Acashile Ngokuphezulu
Ukuguquguquka Okuphezulu Kwe-Pulp Acashile
Isihlanza Esiphezulu Sokuhlanza
Umshini Wephepha Eliminyene Lokuhlanza Eliphakeme
Isihlanza Esincane Sokuhlanza